IMicrosoft Visual Studio ngoku iyafumaneka kwiMac kwinguqu yayo yokugqibela | Ndisuka mac
NgoNovemba ophelileyo, uMicrosoft ukhuphe ingxelo yokuqala yokubonwa kwangaphambili kweVidiyo yeVidiyo, usetyenziso oluya kuvumela bonke abasebenzisi ukuba benze izicelo zeMacOS, i-iOS, i-tvOS, i-watchOS kunye ne-Android kunye nokusetyenziswa kwilifu nakwiwebhu. Ngale ndlela, sikuthintele ukuba sisebenzise iWindows PC ukuze sisebenzise le suite yenkqubo, senze umatshini obonakalayo okanye simfakele kwiMac yethu. ndibhengeze oko Inguqulelo yokugqibela yeMicrosoft Visual Studio yeMac iyafumaneka ngoku.
Esi sicelo sivumela Itekhnoloji yokunyusa iMicrosoft efunyenwe kwiXamarin ukuxhasa ukuphuculwa kwe-C # ye-iOS, i-MacOS, iiWindows kunye ne-Android, kubandakanya ukufikelela kwilifu leXamarin kunye neeprojekthi ezisekwe kwiseva, usetyenziso oluhambelana neAzure kunye neNET Core. Ukongeza, abasebenzisi banokudibanisa iiphakheji zeNuGet kunye nesuti epheleleyo yezixhobo zomntu wesithathu njengeGit. Ezinye izinto zibandakanya ukukhangelwa kweefayile kwindalo yonke, imiyalelo, iintlobo ...
IMicrosoft Visual Studio ifumaneke kuphela kwiWindows, indlela yokugcina iinkqubo eqongeni, kodwa okwethutyana ngoku ufuna ukwandisa ukusetyenziswa kwezicelo zakho kunye nezixhobo nokumiselwa kwe Studio ebonakalayo yeMac bubungqina bayo. Abafana baseRedmond bafuna ukubakho kuyo yonke indalo kwaye okwangoku banazo zonke izixhobo zabo kuzo zonke iiplatifti ezihambayo okanye ezikwidesktop kwintengiso.
UMicrosoft uphinde wachitha iminyaka embalwa esenza izixhobo zakhe, Ngaphantsi kophawu lweSurface, ezinye izixhobo ezinesabelo sazo sempumelelo kwintengiso, ngakumbi uluhlu lweSurface Pro, isixhobo esidume kakhulu phakathi kwabasebenzisi abafuna ithebhulethi iyonke kunye nelaptop, enkosi inyani ukuba ikhibhodi ingasuswa ngokukhawuleza kwaye ngokulula.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » IMicrosoft Visual Studio ngoku iyafumaneka kwiMac kwinguqu yayo yokugqibela
Iadaptha yeMac enezibuko le-USB 3.0 kunye nomfundi wekhadi